Klub Psychology - सेतोघोडा : एक कदम अगाडी , हरेक दिन : भाषा : विज्ञान, अर्थ र समय
भाषा : विज्ञान, अर्थ र समय
मान्छेको सोच , विचार या भावनालाई बोली या ईशारा अथवा लिपि मार्फत उतार्न सकिने आदानप्रदानको माध्यम हो भाषा । भाषाको एउटा विज्ञान छ र एउटा मनोविज्ञान छ । यसको सिकाईमा अर्थ (आर्थिक , भौतीक या मानसीक) खर्च हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण भाषा सिकाईमा समय दिनुपर्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानको निर्माणको क्रममा भाषाका बारेमा आएका अनेक विबाद मध्य एक , निश्चित समुदायमा अधिक संख्यामा रहेका त्याहाँका जाती बिशेषको भाषानै सरकारी र शिक्षणको माध्यम भाषा हुनुपर्यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रस्तावीत प्रदेशहरुको खाकामा भाषा पनि एउटा ठोस आधार हुनुपर्यो भन्ने उनीहरुको बिचार छ । आफ्नो संस्कृती , भाषा र भेषलाई अग्रता दिलाउनुपर्ने सोच भने आफैमा धेरै राम्रो हो ।
भाषा सिकाई एउटा जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो । जसरी बुवा , आमा र आफुलाई सदैव प्रेम गर्नेहरु र निरन्तर अतंरङ्गमा रहनेहरुको छवि मन , मष्तिष्क र आत्मामा कुँदिएर जान्छ र कलान्तरमा हामी त्यसतै छवि झल्काउने वा भएका (स्वरुप या आनीबानी या ब्यवहारमा देखिने न्यानोपन या चिसोपन) मानिसहरुसँग प्रेम गर्न पुग्छौं र सदाको लागि आफ्नो मानसपटलमा राख्न पुग्छौं । भावना र भाषा सिकाईको अन्तरसमबन्ध पनि यस्तै छ ।
भाषालाई पनि मनैदेखि सिक्ने चाहना राख्ने हो भने , आफुले जानेको , आफ्नो अस्तीत्वसँग जोडीएको , आफ्ना मर्महरु सजीलै त्याहाँ राख्न सकिने र सबैभन्दा धैरै बोलिने, प्रयोग हुने भाषा आफ्नो आदानप्रदानको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ताकीे निरन्तर रियाजले यसको प्रतिविम्ब आफ्नो ब्यवहार, बोली र लेखाईहरुमा देखियोस् , दोहोरीयोस् र कलान्तरमा हामीले हाम्रो भाषालाई त्यसरीनै प्रेम गर्न सकौं र सदाका लागि हाम्रो मानसपटलमा कुँदिएर जाओस् । यस्तोमा भाषा सिकाई पनि सहज हुदै जान्छ ।
भाषा सिकाईमा भावनालाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने त र?
उत्तर हो ,भाषा प्रयोग भित्रको मनोविज्ञानको उपयोग । कुनै जाती विशेषको भाषा वा शब्द उसँगको संवाद वा अन्तरंगमा प्रयोग गरियोमात्र भने पनि विचारको आदानप्रदान धेरै सहज भएको हामीले पाएका छौं । यस्ता नमुना काठमान्डांै उपत्यका वरिपरिका तामाङ्ग वस्ती देखि लिएर भक्तपुरका नेवार गाउँहरुमा पाउन सकिन्छ । कारण स्पस्ट छ , भाषा र त्यो पनि आफ्नो भाषाको वा मात्र यस भित्रका शब्दहरुको प्रयोगद्धारा वक्ताले ल्याएकोे आत्मीयता र सम्मानले विचारको आदानप्रदानको सहजता र प्रभावकारीता बढाउँछ ।
त्यसरीनै बिभिन्न राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाहरुबाट शब्द या रुपवाली मात्र भाषा सिकाईमा प्रयोग भएको खण्डमा सिक्नेमा जुन भावनात्मक लक्ष्यको पर्दापण हुदै जान्छ त्यसले सिकाई र प्रयोगलाई आत्मीय र सहज बनाउँदै जान्छ । तर यो एकैचोटी पाईने उपलब्धि भने होईन , यसका लागि शिक्षक र बिधार्थी वीच निरन्तर सहकार्य जरुरी छ । पाठ्यक्रम विकासमा पनि यस्ता प्रयोगहरुलाई राख्न आवश्यक भैसकेको छ ।
भाषा सिकाईका बारेमा विज्ञानले के भन्छ ?
यहाँ विज्ञानको कुरा हुँदैै छ । भाषा सिकाईको मनोविज्ञानलाई वैज्ञानिक विश्लेषण र प्रभावकारी रणनिती र कार्यनितीको कार्यान्वयनले सम्पूर्ण बनाउँछ ।
हाम्रो ठूलो मगजको (Cerebrum) बाहिरी खैरो खरानी रंगको पातलो आवरण (Cerebral cortex ~ Gray matter) सामान्यतया बौद्धिक कामको केन्द्र हो । ठूलो मगजको बाँया भाग (Left hemisphere of cerebrum / cerebral cortex) ामान्यतया दायाँ हाते मान्छेमा बौद्धिक कामको (लेख्ने , पढ्ने , बोल्ने, बुझ्ने , सम्झने , सिक्ने कुराहरुको) लागि संचालित हुने गर्दछ । त्यसरीनै दायाँ हाते मान्छेमा नै दायाँ भागको मगज (Right hemisphere) , सृजना , श्रवण र ठाउँ वा बस्तुको पहिचानको केन्द्र हो भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ । यी कुराहरुको सार के हो भने , मगजको जुन भागले भाषा र बिवेचनाको (logical operation) काम गर्छ ठूलो मगजको अर्को भागले भावना , सृजना र श्रवण सम्बन्धित कामहरुको रेखदेख गर्छ । सामान्यतया दायाँ हाते मान्छे होस् या बायाँ हाते मान्छे होस् , ६५ देखी ९५ प्रतिशत मान्छेहरुमा बाँया मगजनै भाषाको केन्द्र हुने गर्दछ ।
अनुसन्धानबाट आएको अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भाषाको बुझाई , सम्झाई , सिकाई , आदि बौद्धिक कामहरुमा सृजना र श्रवणको केन्द्र दायाँ मगजले सहजीकरण (Facilitation) गर्न धेरै सहयोग गर्दछ । हो मगजका दुबै भागलाई एकबद्ध बनाएर ( synchronization ) द्रुततामा बौद्धिक कामलाई लैजाने हो भने सृजना या संगीत , भावना र श्रवणको केन्द्र दायाँ मगजलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ ।
कसरी सृजना र संगीतको प्रयोगले स्नायुमनोविज्ञान र समग्रमा भाषा सिकाईलाई सम्बर्धन (enrichment) गर्न सकिन्छ त रु
वास्तबमा दृष्टि , श्रवण र भुमण्डलमा भएका चिज ठम्याउन सक्ने संवेदन (sensation/stimulus) र कार्यान्वयन स्नायु आवेगका (Nerve impulses) केन्द्रहरु दायाँ मगजमा हुन्छन् भन्ने अघिनै उल्लेख गरिएको छ । यस बिषयमा मष्तिष्कको अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारीहरु अपुष्ट र अपुग नै छन्् कारण मष्तिष्कको बारेमा मष्तिष्कले नै पढ्नु र बुझ्नुपर्ने बाध्यता र अरु धेरै शोधहरु हुन बाँकी । तर यही कुराको अर्को आधार के हो भने दायाँ मगजमा यी केन्द्रहरु भएपनि हेर्न ,सुत्र र चिजहरु पहिल्याउन बाँया मगजको साथ र साझेदारी आवश्यक छ । जस्तै , संगीत सुत्रे कामको केन्द्र दायाँ मगजमा होला तर भाषा बुझ्ने काम बाँया मगजको हो । यस अर्थमा , दुबै , दायाँ र बाँया मगजको , साझेदारी बिना स्नायु केन्द्रले गर्ने काम त्यती सहज र स्वतस्फुर्त हुँदैन ।
हो मगजमा हुने यही साझेदारीलाई हामीले सृजना र संगीत मार्फत बढवा दिनसक्छौं । सृजना र संगीतका तरङ्गहरु जव दुबै मगजमा प्रवाहित हुन थान्छन् , एक किसिमको सूचनाको (inter-networking of data/ communication) ंजाल त्याहाँ स्थापित हुन पुग्छ र दुबै मगज वीचको सूचनाको यस आदान प्रदाननै भाषा सम्झाई , बुझाई , स्मरण र सहजीकरणमा प्रमुख भुमीका खेल्छ ।
संगीतले गर्दा मगजमा गामा तरङ्गको चहलपहल (Gamma activity) शुरुवात हुन्छ र यसले भावना र स्मरणलाई पनि दु्रतता (speed or pace) दिन्छ । स्मरण गर्नुपर्ने कुराहरु के छ भने भावनात्मक भोगाईको स्मरण धेरै हुन्छ । फेरी शोधहरुले र्इंगित के गर्छ भने संगीत साधकहरुमा Wernicke’s area (यो बायाँ मगजमा रहेको हुन्छ) मा रहेको Planum temporale नामको क्षेत्र सामान्य मानिसहरुमा भन्दा मोटो हुन्छ र त्यसैलेनै संगीत साधकहरुको स्मरण यि सामान्य मानिसहरुमा भन्दा धेरै नैै राम्रो हुन्छ । स्मरण भाषा सिकाईको महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । भाषा सिक्दा (encoding) बायाँ मगजको धेरै प्रयोग हुन्छ तर त्यसलाई स्मरण गर्दा (retrieval) दायाँ मगजको धेरै चहलपहल हुन्छ । तर यहाँ पनि शर्तका अरु कुराहरु भने लागु हुन्छन् ।
यसरी संगीतको साथले दुबै मगजका भागहरु उत्तिकै दु्रतता र साझेदारीमा कार्यहरु गर्न थाल्छन् । चाहे त्यो भाषाको बिषय होस् या समग्र मानव चेतनाको परिधि होस् या मानवीय भावनाको कार्यान्वयन होस् , ती सबै एक कदम अगाडि बढ्छन् ।
यी सबै कुराको सम्बन्ध भाषाको किचलोलाई सम्बोधन गर्नुसँग छ । जनजाती र नेपालका अरु समुदाय र जातजातीमा निहित बौद्धिक र सृजनशील क्षमतालाई एकै ठाँउमा उभ्याउनु छ भने भाषामा रहेको अप्ठ्याराकोे न्युनीकरण र निराकरण गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न अघिनै भनझैं हामी सृजना र संगीतको साहरा लिन सक्छौं र पढाई , बुझाई , सम्झाई , सिकाई र लेखाईको स्तर नेपाली भाषामानै बढाउन सक्छौं्र । नेपाली भाषालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुको कारण के हो भने सारा नेपालीले बोलिराखेको र बुझिराखेको यस भाषाको सिकाईको लागि थोरै अर्थ र समयको मात्र लगानी चाहिन्छ र यस भाषामानै धेरै अनुसन्धान भईसकेकाले वैज्ञनिक पनि हुन जान्छ । हो अरु धेरै राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाहरुमा पनि यस्ता गहन अनुसन्धानहरु भएका छन् ।
फेरी जानकारीमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली भाषा आफैमा सम्पूर्ण भाषा भने होईन । नेपाली भाषामा धेरै भाषाहरुबाट शब्दहरु ल्याईएका छन् । त्यसमा पनि विज्ञानका अंग्रेजी प्राविधिक ९तभअजलष्अब०ि शब्दहरु र संस्कृतका शब्दहरुको बाहुल्यता नेपाली शब्दकोषमा धेरैनैै छ । अंगे्रजीका यी प्राविधिक शब्दहरुको नेपालीकरण गर्नु त्यती सहज पनि छैन । फेरि नेपालीकरण गर्दा आउने मर्म र अर्थ पनि फरक हुन जान्छ ।
जस्तै , सिजोफ्रेनीया (Schizophrenia) एउटा यस्तो मानसिक रोग हो जसमा रोगी मानिस नभएको कुरा देख्छ या सुन्छ ( Hallucination) र हुन नसक्ने कुरामा विश्वास (Delusion) राख्छ । सामान्यतया यस रोगलाई नेपालीमा खण्डित मष्तिष्क भनिदो रहेछ । तर सामान्य मान्छेले यस रोगलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने शब्द हो पागलपन या खुश्केको । फेरी सामान्य मान्छेलाई यस्ता मानसिक रोगहरुको भेद र पागल भन्दा रोगी माथि परेको मानसिक असर पनि थाहा हुने कुरा भएन । यसरी एउटा मानसिक रोग र रोगी विना निषकर्ष र उपचार अलग्याईएको हुनेभयो । तर्क के हो भने , छोटा र अत्याधिक प्रयोगमा आएका र सजीलै अथ्र्याईने शब्दहरु यस्ता रोगहरुको नाम हुनुपर्छ ताकी विभेद , पहिचान र उपचार सजिलै होस् ।
देशमा भएका राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाहरुबाट यस्ता प्राविधिक र अरु धेरै शब्दहरुको माग र भार पुरा गर्न सकिन्छ । आफ्नो भाषाबाट आएका शब्दहरु अभिब्यक्त हुन पाउँदा पे्रसित हुने कुरा पनि सिक्ने , बोल्ने र सुन्ने सबैलाई सहज हुन्छ । मान्छेले शब्दहरु अनुसार मर्म ल्याउन सक्छन् र ज्ञानको परिधि पनि ठुलो हुन्छ ।
हो देशमा भएका बिभिन्न राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाहरु र त्यसमा भएको शब्दको भण्डार र शब्दकोष नेपाली राष्ट्रभाषामा समायोजीत गरिनु जरुरी छ । नेपाली भाषाको एउटा भाषिक Encyclopedia (समग्र मानव ज्ञान वा केही निश्चित बिषयमा बर्णानुक्रम अनुसार लेखहरु समेटीएको र धेरै अध्यायहरुमा प्रकासित हुने बृहत्तरज्ञानकोष) बनाँउ । नेपालका भएका अरु राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाहरुले स्वत त्याहाँ आफ्नो ठाउँ लिन्छन् । त्यसपछि नेपाली भाषा एउटा समुदाय विषेशको होईन कि नेपाली माटोको भाषा हुनेछ । यो समायोजनले नेपाली भाषालाई आत्मीय र सम्मानीत बनाएर हरेक भाषी माझ प्रवर्धन त गर्छ नै र नेपालीहरुको एकताको एउटा कडी पनि बन्छ । एउटै नेपाली भाषा अझै धेरै धनी हुन्छ ।
भाषा आफुलाई प्रेसित गर्ने माध्यम त हो नै र यसका अलावा जीन्दगीका बुझाईहरुलाई पनि परिभाषित गर्ने एउटा ठुलो वृत्त हो । फेरी भाषा सिकाइ मात्र बोल्नु सँग सम्बन्धित छैन , यो त विज्ञान , अर्थ र राजनिती भित्रको बौद्धिक आयाम जाँच्ने मापक हो र ज्ञानको परिधिलाई एउटा उँचाईमा लैजाने आधार पनि हो । जती धेरै शब्दहरुको प्रयोग भाषामा हुन्छ त्यही अनुपातमा मान्छेको बौद्धिकता र बुझाईको परिधि बढ्दै जान्छ र कलान्तरमा भाषा पनि सम्पन्न हुँदै जान्छ । भाषाको सम्पन्नताले सिधै गुणत्मक वा संख्यात्मा बौद्धिक जमातको चिनारी सम्झाउँछ । यस्तोमा सारा नेपालीले बुझ्ने आत्मीय र सम्मानीत नेपाली भाषालाई संसारले हेर्ने दृष्टीकोण नै उच्च हुन्छ ।
यो भुमण्लीकरणको समयमा एउटै सर्वसम्पत्र भाषाले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । TOEFL र IELTS पढ्नका लागि जस्तै नेपाली पढ्नका लागि त्यो जमात जम्मा हुन सक्छ किनकी अघि भनिएझै भाषिक सर्वसम्पत्रता नै विज्ञान , अर्थ र राजनिती भित्रको बौद्धिक आयाम जाँच्ने मापक हो । फेरी भाषा सिकाई बोलाई विचारको आदानप्रदान मात्र होईनकी यो त अन्तराष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो ब्यपार र ब्यवसाय बढाउने माध्यम पनि हो ।
के थाहा कुनै दिन TONIL ( Test of Nepali as International Language ) को पनि शरुवात हुन्छ कि रु यो TONIL देशको अर्थतन्त्रलाई बढवा दिने टनिक पनि हुन सक्छ है । बिदेशको पढाईमा खर्च हुने अरबौंको डलर र सस्तोमा बिकेको नेपाली श्रमको बचत नेपालको विकासका लागि हुन सक्छ । तर यो उँचाईमा पुग्नको लागि यस समस्या माथि अनवरत काम हुुनु आवश्यक छ ।
त्यसो भएमा यसै बृहत्तर भाषा भित्रका अरु भाषा र भाषिकाको संरक्षण र सम्र्बधन गर्नमा पनि टेवा पुग्नेछ । गौंण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने , बितेको ५० बर्षमा संसारभर भएका २७०० भाषाहरु हराएका वा लोप भएका छन् । हाल आएर ५००० को हाराहारीमा मात्र संसारभर भाषाहरु बोलीने र शायद त्यसभन्दा पनि थोरै लेखिने गरिन्छन् । शायद भाषाको ठूलो खेतमा अल्पसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाको बिउ जोगाउन सकियो भने मात्र पनि कलान्तरमा नेपाली भाषिक शब्दकोषलाई धेरैनै फाइदा पुग्नेछ । शायद हामी नयाँ कोंणमा भाषाको अण्वेषण र अनुसन्धान पनि गर्न सक्नेछौं । यसो गर्न सकेमा हाम्रा राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाको नियती लोप भएका ती भाषाहरुको जस्तो हँुदैन होला ।
भाषा सम्बन्धि बिवादलाई यसरी विज्ञान , सृजना र सम्र्बधनको बाटोमा हिंडाएपछि एउटा झगडा खत्तम हुन्छ र मानसिक र जुझारु शक्ति , अर्थ र समय सबैको वचत हुन जान्छ । वचत भएका कुराहरु आय हुन्छन् र यो आयलाई देश विकासमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
अब केहि समस्याहरु माथि दृष्टिगोचर गरौं र ती माथि काम गर्न सकिने सम्भावनाहरु माथि विचार गरौं ।
केहि समय अघि एउटा टेलीभिजन च्यानलमा सभासद सुरेस आलेमगरले , धेरै बर्ष पहिले कुनै क्यामपसमा अध्यापकका लागि भएको अन्र्तवार्ता पछि आफुलाई शैक्षिक जागीर नदिईएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँ अनुसार त्यसको कारण थियो जातीय थिचोमिचो । तर यस्तो पनि हुनसक्छ कि मगर उहाँको मातृभाषा र नेपाली चाहीँ उहाँको दोस्रो भाषा भएकाले नेपालीमा अन्र्तवार्ता दिंदा उहाँको प्रस्तुती सहज भएन । दक्षता र विज्ञता हँुदाहँुदै पनि शायद प्रेसित गर्ने शब्दहरुको अभावले शायद प्रस्तुती स्वतस्फुर्त भएन होला ।
यसरीनै ज्ञान भएर पनि आफुलाई ब्यक्त गर्न नसक्दा धेरैलाई धेरै ठाउँमा यस्ता समस्याहरु आईपरेका छन् र सबैभन्दा यस समस्याले जनजातीलाई पिरोलेको छ । स्नायुविज्ञानमा भएका अनुसन्धानहरुले के सकरात्मक तर्क अगाडि सारेका छन् भने जनजातीमा संगीत श्रवण तथा विन्यास गर्न सक्ने क्षमता अरु जात-जातीमा भन्दा धेरै छ । संगीत सृजना हो र अगाडि नै भनिए जस्तै सृजनाको केन्द्र दायाँ मगज हो र दायाँ मगजले सिकाईमा (शैक्षिक वा अरु) सहजीकरण र सम्बर्धनको भुमिका खेल्छ ।
यहाँ अगाडि सार्न खोजिएको तर्क के हो भने , संगीत सिकाईलाई शैक्षिक विकासमा अनिवार्य किन नगर्ने रु तपाँई हामीले देखे बुझेको कुरा हो पूर्वका किंरातीहरुको नेपाली संगीत उधोगमा कति वर्चश्व छ भनेर । त्यसो भने संगीत र सृजनामा मात्र प्रयोग भएको हाम्रो दायाँ मगजलाई शैक्षिक विकासमा प्रयोग किन नगर्ने रु आखिर भाषा सुत्रे कामको अख्तियारी त दायाँ मगजलाई ( right auditory cortex) पनि त छ ।
तपाँई हामी जस्ता लर्बराउने , बर्बराउने र अभिब्यक्त हुन नसकेका सबैलाई यो एउटाMusical therapy पनि हुनसक्छ र अभिब्यक्ति भाषाको एउटा समस्या हल हुनसक्छ । मात्र संगीत होईन कि सृजना र कलाका अरु आयामलाई पनि लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।
धेरै भाषा र भाषिकाहरुको सिकाईले पनि भाषा सम्बन्धि अप्ठ्याराहरु निम्त्याएका छन् । जस्तै कुनै भाषा वा भाषिका आफ्नो मातृ भाषा भएकाले त “ विश्व एक गाँउको” यस समयमा अंगे्रजीलाई अनिवार्य रुपमा तेस्रो भाषाको (मातृभाषा र राष्ट्रभाषा बाहेक) रुपमा सिक्न परेको छ । यस्तोमा न मातृ भाषाको , न राष्ट्रभाषा नेपालीको , न अंगे्रजी भाषाको नै राम्रो सिकाई र बुझाई नै हुनसकेको छ । यहाँ यसरी नेपाली भाषा पहिले सिकेकाले पछि सिकेको अंगे्रजी भाषाको दुरुस्त सिकाई र स्मरण गाह्रो भएको छ भने (Proactive interference) त्यही अनुपातमा भर्खरै सिकेको अंगे्रजी भाषाले गर्दा पहिले सिकेको नेपाली भाषाको दुरुस्त र मर्म सहितको सिकाई र स्मरण पनि त्यती सजिलो छैन (Retroactive interference)।
फेरी अंगे्रजी भाषामा शिक्षा लिएका र नलिएकाहरुको प्राबिधिक र अरु शब्दहरुको बुझाई र प्रयोग पनि फरक छ । यसकारण पनि सिकेको कुरा पे्रसित गर्ने काम झन् असहज भएको छ । त्यसकारण होला , बोर्डिङ्ग स्कुलका बिधार्थीहरुले अंगे्रजी भाषामा पढेको कुरालाई नेपालीमा उल्था गर्न गाह्रो मानेका छन् र सरकारी स्कुलका बिधार्थीहरुले नेपाली भाषामा पढेको कुरालाई अंगे्रजीकरण गर्न सकेका छैनन् । कारण स्पस्ट छ , कुनै पनि भाषामा बोलेका , लेखेका , पढेका र सुनेका कुराहरुको अथ्र्याई र बुझाई फरक हुन्छ र ठेट उल्था गर्न सम्भव पनि छैन । यस्तोमा शब्दहरु भित्रको मर्म (semantics) र मनोविज्ञान बुझ्नु परको कुरा हो । तपाँई आफै भत्रुहोस् यस्तोमा हाम्रो शिक्षाको स्तर के छ होला रु हो यस समस्या माथि संगीतको प्रयोग धेरै फलदायी हुनसक्छ किनकी सिकेर यत्रतत्र छरिएका ज्ञानलाई संगीतले एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गर्छ (defragmentation of memory schema) र असमन्जसलाई पनि हटाउँछ । ज्ञानलाई एउटै मालामा उन्ने धागो हुन सक्छ संगीत ।
फेरी त्यहि प्रश्न अगाडि तेर्सिन्छ , सिजोफ्रेनीयालाई (Schizophrenia) के भन्ने रु खण्डित मष्तिष्क अथवा कुनै तीन बर्ण भएको शब्द खोजी गर्ने ताकी बुझाई र सिकाई सहज होस् र हरेक मानसीक रोगलाई पागलपन वा खुश्केको भत्रु नपरोस् । यस्ता दुई या तीन बर्णका छोटा र चाहिएको अथ्र्याउने शब्दहरु हाम्रो देशमा भएका राष्ट्रिय भाषा र भाषिकाहरुमा अनगिन्ती भेट्टाईन्छ होला । यस्ता दुई या तीन बर्णका शब्दहरु सम्झन र बिर्सन पनि सजिला हुन्छन् । यसतर्फ भाषा विज्ञहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
हो केही समस्याहरु र अनगिन्ति सम्भावनाहरु छन् । होईन , नेपाली भाषामा होईन कि अरु कुनै भाषामा यो प्रयोग गरौं भत्रे कुरा आउँछ भने पनि त्यसमा विभित्र राष्ट्रिय भाषा र भाषिका बोल्ने नेपालीहरुले सहयोग पुर्याउनु कर्तब्य हो । कारण , सारा नेपालीलाई भावनात्मक रुपमा जोड्ने समायोजीत र एककृत भाषा पनि देश बिकासको महान यात्रामा अपरिहार्य छ । यात्राको लक्ष्य एउटै हो , विकास र गरिवी बिरुद्धको युद्ध , तर समय र आवश्यकता अनुसार बाटाहरु र कार्यनितीहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ , लक्ष्य प्राप्तिको लागि । तर अहिलेका लागि भने , आफ्नो भाषालाई अहिलेनै , बन्न सक्ने प्रदेशमा केन्द्रीयता वा अग्रता दिन्छु भत्रु त्यती किफाएती देखित्र किनकी यो पद्धतीमा जानु अघि एउटा वैज्ञानिक गृहकार्यको आवश्यकता छ , कुरा अर्थको आउँछ र यसैपनि भाषा सिकाई र बुनाई एउटा लामो प्रक्रिया हो । हो आवाज उठाउने जात(जाती , सम्प्रदाय , समुह या मान्छेले भाषाको संरक्षण र विकासमा पहिलो अग्रसरता देखाउन सके , भाषा कुनै जाती बिशेषको समस्या रहने छैन ।
भाषा विज्ञान र मनोविज्ञान सम्बन्धि लेखीएका धेरै शोध पत्रहरु नेपालका विश्वविधालयका पुस्तकालयहरुमा प्रयोगविहिन भएर यसै थन्किएका छन् । भाषाको किचलो सम्बोधन गर्न ती शोध पत्रहरुले धेरै सघाउन सक्छन् । तीनीहरुको खोजी र प्रयोग यस समयमा हुनसकेन भने कहिल्यै हुनेवाला छैन । हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने बिद्धानहरु र कर्मद्धारा संसार प्राप्त गर्न चाहनेहरु प्रतिकुल परिस्थीतिमा सबैभन्दा धेरै काम गर्छन् । यस तर्फ संविधानसभा तथा सम्बनिधत निकायको ध्यान जाओस् ।
यसरीनै प्रक्रिया संगत तरिकले काम गर्ने हो भने शायद जातीयताको आधारमा प्रदेशको निर्माणका बारेमा उठेको बिवादलाई वैज्ञानिक विचारहरु ल्याएर र समस्या माथि काम गरेर समाधान तर्फ लैजान सकिन्छ होला । यहाँ जातीयताको सिधा सम्बन्ध भाषाको किचलोसँग पनि जोडिएको छ । हामीलाई लाग्नु पर्छ र बुझ्नु के जरुरी छ भने जातीयताको शरुवात बुवाबाट आएको कर्म गर्ने आँट र शक्तिबाट र आमाबाट आएको प्रेम गर्न सक्ने र सिकाउने क्षमताबाट मिसिएर बन्ने संस्कारबाट हुन्छ । हो आजै देखि हामीले समस्या माथि काम गर्ने थालनी र ज्यँुदा मान्छेहरुलाई प्रेम गर्न सक्ने क्षमताको संस्कारको थालनी गर्नुपर्यो । समाजीक बेकम्मा र अधबैंसे हुल्लडबाजको जमात हुनबाट युवापक्ष र देशलाई रोक्नुुपर्यो ।
लेखक – राज बश्याल
अध्यापक – मनोबिज्ञान , त्रिभुवन बिश्वबिधालय
Dated : April 2010
Republished:18th December 2015
You can "Like" and comment at our Facebook page : Klub Psychology: सेतोघोडा
As this article is based on many neuropsychoogical aspects of Human Brain, if not able to catch up with different terminologies, you can refer to the Wikipedia or consult us for the definition and meanings.
Posted by klubpsychology.blogspot.com at 8:40 PM
जनहितका लागी जारी सुचना – भुकम्प पिडितका लागी न्या...
जनहितका लागी जारी सुचना – भुकम्प पिडितका लागी न्य...